IOS 9 chimiro chinobvisa maapplication otomatiki | IPhone nhau
Nyowani iOS 9 chimiro chinobvisa maapplication otomatiki kana uchigadzirisa
Nezuro masikati, Apple yakaburitsa yechipiri beta yeIOS 9. Iwo ndiwo mavhezheni ekutanga uye, zvine musoro, kushamisika kuchasvika mune yega yega yega yeibetas yakaburitswa kudzamara voruzhinji vhezheni yeIOS 9 yaburitswa. Ipo munhu wese achivandudza, kunyanya vashandisi vane 16gb iPhone / iPod kana iPad, ivo vakawana chiitiko chitsva chakatishamisa isu tese; basa rinonakidza kwazvo, kubva pakuona kwangu, kuti zvichaita kuti zvinhu zvitiitire nyore kana taenda kunoisa system uye ngative nenzvimbo yakawanda yekuchengetera inogarwa.
Icho chitsva, sezvaungaona mumufananidzo unotungamira ichi chinyorwa (kumashure kwakapepetwa), ndiko kuti, Kana tisina nzvimbo yakakwana yekugadzirisa, iOS 9 ichatikumbira mvumo yekubvisa zvishoma zvishandiso kuti uwane nzvimbo yekuti iwe uvandudze. Mushure mekuita kwese, iwo maficha anozodzoreredzwa otomatiki. Zvakafanana ne mini iCloud backup uye, kune rumwe rutivi, zano rakanaka iro rinofanirwa kutendwa.
Kana isu tichiona iyo pop-up hwindo, iyo yatinotarisira kuti ichashandurirwa muchiSpanish mune ramangwana betas, tinogona kukanzura, izvo zvinomisa kumisikidza, kana "Rega Bvisa MaApplication", ayo ipa mudziyo mvumo yekuwana nzvimbo nekubvisa maapplication akasiyana siyana. Parizvino, hazvizivikanwe kuti ndeapi mhando ezvishandiso zvaachaburitsa muchiitiko ichi, kunyange hazvo zvisingaite kunge zvichanyanya kukosha. Unogona kuburitsa mafomu anotora nzvimbo uye asinganyanyo shandiswa kana kutanga zvakananga neakanyanya kuremedza kuti ubvise mashoma mashandisirwo,
Yesarudzo idzo Ndinofungidzira kuti ndinogona kushandisa ino system, haina kundisiya ndakadzikama zvachose. Kana iwe ukaisa izvo zvinoshandiswa uye wadzoreredza ruzivo rwese, hapana chinoitika, asi maapplication mazhinji anochengeta mafaera mune cache iyo yatingazopotsa gare gare. Semuenzaniso, mitambo yemitambo, kunyangwe izvi chaizvo zvisingaite chero cache. Chero nzira, kuchiri kutanga. Hapana matambudziko ekurasikirwa neruzivo akambotaurwa mushure meichi chiitiko, saka zvinoita sekunge yakachengeteka zvachose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Nyowani iOS 9 chimiro chinobvisa maapplication otomatiki kana uchigadzirisa
Iyo yakakura sei bhuru
Kana iwe usingazive izvo zvinhu zvinoshandira, iwe unosheedza makuru mazano bullshit. Izvo zvinonzwika zvakanyanya kunge "kuva dhongi" kwandiri neruremekedzo rwakakodzera.
Ikozvino mamiriro eCydia Substrate yeIOS 8.3
[Tutorial] Maitiro ekuJailbreak iOS 8.3